Inka Badan 30 Ruux Oo Ku Dhimatay Duleedka Baydhabo. – Bogga Calamada.com
Inka Badan 30 Ruux Oo Ku Dhimatay Duleedka Baydhabo.
January 30, 2017 4:32 pm Views: 10
Wararka ka imaanaya degmada Baydhabo ee xarunta gobalka Baay ayaa sheegaya in deegaan hoostaga degmadaasi ay ku dhinteen 32 ruux kuwaasi oo ka mid ahaa dadka ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalada Baydhabo.
Dadkan ayaa dhintay kadib markii ay cabeen biyo wasaq ah oo ku jiray Waro Biyood ku taala inta u dhaxeysa degmada Baydhabo iyo deegaanka Awdiinle’iyadoona tiro kale oo dad shacab ah o biyaha wartaasi cabay ay xanuuno la il daranyihiin.
Dhacdadaan ayaa kusoo aadaya xilli abaar daran ay ka jirta dalka Somaliya taasi oo si aad ah u saameysay dadka iyo duunyada’iyadoona abaarta ay ka dhalatay Roob yari ka jirta guud ahaan dalka Somaliya.
Dad fara badan ayaa dhawaan gudaha magaalada Baydhabo ugu geeriyooday cudurka Daacuunka’iyadoona tiro kale oo la ildaran xanuunkaasi ay jiifaan goobaha caafimaadka ee degmada Baydhabo.